Singapho - Izixazululo ze-OMG-Nceda abantu abakhulileyo kuthintele ukuwa kunye nokuzula | Izisombululo ze-OMG
I-Singapore Channel 8 News (27 Aug 2017)
Iziphumo zeOmG -Sibonelela ngezisombululo zeteknoloji ezinje ngothintelo lokuwa, iialam zikaxakeka / zoxinzelelo, iitrackers zeGPS kunye neekhamera zokhuseleko. Abakhathaleli a babanakekeli ngokunciphisa umthwalo wabo ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo ngenxa yeemfuno zokukhathalela abakhubazekileyo okanye abantu abadala.
VCare Inkqubo yoKhuseleko lweKhaya lwe-WiFi / 3G
I-vCare yinkqubo ye-alamu yokhuseleko eza kusetyenziswa kubantu abadala, ekhaya. Inkqubo ibonelela ngokudityaniswa kokusetyenziswa, kubandakanya ukhuseleko lwasekhaya, indlela yokuphila esempilweni kunye nokukhathalela abantu abadala. Isebenzisa iinethiwekhi ezimbini (i-WiFi kunye ne-GSM / 3G okanye i-4G) ukuhambisa ulwazi ukuqala ii-alamu- indlela elula, ekhuselekileyo nekhawulezayo.
Nokuba use-ofisini okanye ukhenketho lokuya phesheya, i-vCare ikunye nawe. Unokwazi ngokulula isimo senqanaba le-alarm yakho, ukubeka iliso kwindlu yakho kwaye unakekele abazali bakho. Kuyenzeka ukuba ujonge ubumanzi kunye namaqondo obushushu endlu (zombini ngaphakathi nangaphandle). Nge-vCare, ungaqinisekiswa ngokhuseleko lwakho kunye nokhuseleko.
Ithintela ukuwa kunye nokulandelelwa ngokulula kwabantu abadala
IiNgcaciso zokuNqanda ukuNqanda
Ukukhusela kwethu ukuPhuphuma kweAlarms Alarms ayilula ukuyisebenzisa: Xhuma umgca wokulala kwesisindo, isitifiketi sesihlalo, okanye umgangatho womgangatho kwisilathiso sokuthintela ukuwa. Emva koko fakela umgca wokunyanzela ukulinganisela kwisibhedlele okanye usihlalo, phantsi komhlali obeka engozini yokuwa okanye ukuthuka. Ukuphakama kwamagqabi angaphantsi komhlaba kufakwa ngumbhede okanye umnyango. Xa umzamo wokuhlala uhlala, uxinzelelo lususwa kumbhede okanye kwisihlalo okanye usetyenziswe kumatshini womgangatho, okwazisa umkhathaleli nge-audible audible, pager ecwebileyo, i-alarm hall, ukukhanya kwefowuni, okanye i-monitor ephakathi ukuze bakwazi kunika uncedo xa kuyimfuneko.
Isifo sengqondo esixhalabisayo / abantu abadala / i-GPS Tracker kunye ne-Detector yokuwa
45188 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-62 Namhlanje